မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ဆုတောင်း
Posted by mabaydar at 12:25 PM
အယ် ဘယ်လိုတွေဖစ်နေပါလိမ့်။ သနားပါတယ်
11/30/2008 5:38 PM
ဗေဒါ့ဆုတောင်းကို ဖတ်ပြီး ကျနော့်ရင်ထဲ တစ်ခုခုကျန်ရစ်တယ်ဗျာ။ မဗေဒါကတော့ တကယ်ပေးတတ်တယ်နော်။
အဲဒီလို ဖီလင်မျိုးနဲ့ ရေးတာတွေ သိပ်ကိုသဘောကျတယ်..း)။
11/30/2008 6:04 PM
အလှတရား - ဘယ်လိုခံစားရတာတုံး.. ?
ဟန်လင်းထွန်း - သနားရင် အော်စီလာရင် ထမင်းကျွေးနော်.. ဟဲ.. ဟဲ..
ကိုမင်းထက် - တစ်ခုခုကျန်ရစ်လား.. မဗေဒါကတော့ ကျန်ရစ်မဖြစ်ချင်ဘူး.. အဟိ... ချန်ရစ်ပဲ ဖြစ်ချင်တယ်..
ကိုထိုက်ရေ.. - အဲဒိသီချင်းက ကော်နီမူရင်းပါ..
ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ ဟိုသီချင်းကို ပိုဆိုချင်တာ..
"အကြင်နာကို နာတာတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းလိုက်တော့.. ရင်မှာ မင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူး".. အဟင့်.. ဟင့်... ငိုချင်လာပြီ.. ဗြဲ.. ဟဲ.. ဟဲ..
ဒါပေမဲ့ ဖီလင်နဲ့ရေးတဲ့ပိုစ့်တွေက ပေးရတဲ့တန်ဖိုးကြီးတယ် ကိုမိုးမောင်ရေ..
သဘောကျတယ်ဆိုတော့ ခံစားရကျိုးနပ်တာပေါ့.. ကျေးဇူးပါ..
ကောင်း၏ အမုန်းမပွားပဲ ဥပစ်ခါ ၀ါဒီ ကျင့်သုံးခြင်းက မြတ်၏ ...စာလုံးမှားနေရင်သီးခံပါ :P
12/01/2008 12:01 AM
12/01/2008 4:40 AM
ငါ လဲ ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆုံရပါစေ နဲ့ လို့ဆုတောင်း တယ်။ ဒီဘဝ တင် မဟုတ်ဘူး နောင်ဘဝတွေ မှာလဲ ထပ်ပြီးမဆုံဆည်း ချင်ဘူး။ ဒီကဗျာ က တကယ့် ငါ့ရင်ထဲ က ခံစားချက် နဲ့ တထပ်ထဲ ပဲ။
တကယ့် ခံစားချက် ပြည့်ဝ တဲ့ ကဗျာ လေပါ။
မယုံနဲ့ မယုံနဲ့အချစ်ဆိုတာ မုသားတွေ နဲ့ ပေါင်းစုထားတဲ့ စာစုလေးတစ်စု ....
12/01/2008 5:13 PM
Retkhita - ဟုတ်၏.. ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့က အဓိကပဲမှတ်လား..
ကိုဟတ်ကြီးရော ဘယ်လိုဆုတောင်းမလဲ သိချင်လိုက်တာ..
စင်ဒန်းလားရေ.. မပတ်သတ်ချင်တော့တာမှ ဒီဘ၀တင်မကဘူး နောက်ဘ၀ဆက်တိုင်းပါပဲ..
နိုဝင်ဘာစိုးရေ.. မပတ်သတ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင် စိတ်ထဲတွေးမနေပါနဲ့တော့ တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် သတိရတယ်ဆိုပေမဲ့လဲ ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတွေးလိုက်ပါ.. အမြန်ဆုံး ပျော်ရွှင်မှုရလာမှာပါ.. မဗေဒါ နိုဝင်ဘာစိုးအတွက်ပါ ပိုဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်နော်.
မောင်မျိုး ကြည့်ရတာ ကောင်မလေးတွေကို မုသားတွေလိုက်ပြောနေကျထင်တယ်..
ကဗျာလေး အရမ်းကောင်းတယ်.. heart ထိတယ်... ဆုတောင်းတွေ ပြည့်ဝပါစေ....
12/01/2008 9:57 PM
12/02/2008 12:33 AM